Home Wararka Warmurtiyeedka la filayo inuu soo baxo dhawaan oon waxba ka badali doonin...
Warmurtiyeedka la filayo inuu soo baxo dhawaan oon waxba ka badali doonin boobka doorashada
Waxaa la filayaa in saacadaha soo socda uu Golaha Wadatashiga Qaran soo saaro warmurtiyeed ku saabsan qaabka geedi socodka Doorashooyinka dalka. Sida MOL loo xaqiijiyay warmutuyeedka ayaan gabi ahaanba aan ka hadli doonin qodobadii xasaasiga ee lagu muransanaa.
Sidoo kale madaxda ka qaybgalaysa kulankaas ayaa qoraalka ay soo saarayaan uu noqon doonaa mid magac u yaal ah iyada oo oo ayan waxba ka badali doonin boobka doorashada ee ka soota deeganada dowlada goboleedyada dalka.
Waxaa kaloo la soo saari doonaa jadwal marnaba aan la ixtimaaami doonin kaas oo maraya wadadii ay mareen shanti jadwal eek a horeeyay kan maanta soo baxaya.
Waxaa muuqata walwal cusub kaas oo ah in shirkaan dhowrka maalin socday uusan noqon doonin mid xal waara ka keena arimaha cakiran ee doorashooyinka.
Previous articleSomalia’s international partners urge leaders to ensure credible elections
Next articleWarbixinta gudiga baarayay Farmaajo oo beri laga ansixin doono Golaha Wasiirada
MW Deni oo dallacsiinaysa saraakiisha ugu sarraysa ciidanka PSF! Waa maxay...